कहा छन् भारतलाई अण्डर १९ बिश्वकप जिताउने कप्तान उन्मुक्त चन्द ? – Talking Sports
“मलाइ सबै भन्दा ठुलो झड्का त तब लाग्यो जब मलाइ दिल्ललीको एकदिवसिय टोलीबाट निकालियो । त्यो समयमा म भारतको ए टोलीको कप्तानी गर्ने गर्थे । मुम्बईमा अंचल स्तरीय टि–२० खेल्दै थिए, रन पनि बनाइरहेको थिए । त्यसपछि मलाई एकदिवसिय टोलीबाट मात्र निकाले । म शिखर धवन, गौतम गम्भिरसँग खेल्दै थिए । छनोटकर्ताहरु आए र मलाई भने कि मेरो लागि केही नयाँ सोचिदै छ अनि दिल्लीको टिमबाटै निकाले,” पुर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपडासँग गरिएको कुराकानीमा चन्दले आफ्नो जीवनको दुर्भाग्यपूर्ण घाटनाहरु सुनाउने क्रममा भने ।
“स्टेट प्रतियोगितामा दिल्लीले तीन खेल हारेपछि मलाई खेल्ने मौका दिइएको थियो । मैले पाचों र छैटौं म्याचमा ब्याटिङ्ग गर्ने मौका पनि पाए । एउटामा ७५ र अर्कोमा ८० रन बनाउदै मैले दुवै पटक म्यान अफ द म्याच पनि जिते । तर मैले धेरै खेल खेल्न नपाएकोले मसँग उल्लेख्य संख्यामा रन थिएन । मलाई भारतको ए टोलीबाट निकालियो । यही समय म आईपिएलमा पनि थिइन ।”
“२०१६ मा मलाई मुम्बई इण्डियन्सले रिटेन गर्यो । खेलाडीहरु धेरै भएकाले मैले खेल्ने मौका पाइन । म यस्तो टोलीमा जना चाहन्थे जहा मलाई प्रशस्तै खेल्ने मौका मिलोस, कुरा पैसाको थिएन । मैले एकजना सँग कुरा पनि गरेको थिए । उनले मलाई मुम्बई छोड्दै आउन आग्रह गरेका थिए । बेस प्राइसमै लिएको भएपनि धेरै खेल खेल्नु थियो । मैले मुम्बई छोडे तर अक्सनमा मलाई कुनै पनि टोलिले लिएनन् ।”
“मलाई त छानाबाट खसाएको जस्तो लाग्यो । मसँग अब आईपिएलको सम्झौता पनि थिएन अनि दिल्लीको क्रिकेट पनि । मलाई मेरो कपडा च्यातेर नाङ्गो बनाइएको जस्तो महसुस भयो । सबैतिरबाट म एकै पटक कहि पनि थिइन । म एकै चोटि ३–४ दिन पछि आफ्नो खाटबाट उठे र सिधा मैदान पुगे । क्रिकेटबिना म बाच्न सक्दिन भन्ने आभास भयो । मलाई कहिले काही निकै दुख लाग्छ तर सोच्छु मेरो लागि धेरै बर्ष राम्रो गएको थियो, २–३ बर्ष नराम्रो भयो भन्दैमा मेरो लागि सबै बाटो भन्द भयो भन्ने हुदैन । हामी जहिले हारेपछि म मात्र किन ? भन्छौ तर कहिले पनि जितेपछि यही कुरा भन्दैनौ,” चन्दले थपे ।